Wasaaradda Waxbarashada Somaliland Oo Go’aammo Kasoo Saartay Arrintii Ka Dhacday Iskuulka Nuuradiin: |
Wasaaradda Waxbarashada Somaliland Oo Go’aammo Kasoo Saartay Arrintii Ka Dhacday Iskuulka Nuuradiin:
Hargeisa(GNN):-Guddidii Wasaarada Waxbarashada Somaliland u xilsaartay inay baadhis ku sameeyaan xaalada iyo dhacdadii ka dhacday Dugsiga wiilasha ee Nuradiin Sare 03/03/2021 ayaa manta soo saaray go,aamo la xidhiidha arrintaa.
Go,aamada Guddida ayaa u dhignaa sidan
Guddidu waxay go’aamisay ina baadhis dheeraad ah lagu sameeyo Buugaagta Manhajka Qaranka oo lagu xardhay magaca Dugsiyada Nuuradiin, iyagoo aan ogolaansho laga haysan Wasaaradda Waxbarashada; isla markaana ardayda dugsiyada Nuuradiin dhigata ku qasba inay iibsadaan buugaagtaa ay Nuuradiin ku qoran tahay oo keliya. Kuwaasoo lagu iibiyo qiimo aad uga sarreeya, kaas oo xad-gudub ku ah hanaanka dhaqaale ee suuqa xorta ah. Sidoo kale guddu waxay goaamisay in dugsiga Nuuradiin joojiyo iibka buugtaa laga bilaabo marka goaankani soo baxo.
Guddida waxa u caddaatay in tirada ardayda ah fasalada dugsiga wax-ku-bartaa ay aad uga badan yihiin tirada ay waajibiyeen Siyaasada Waxbarashada Qaranka iyo Hab-raaca Xanuunka KALA-ROORA (COVID19) oo labaduba waajibiyay inuu arday waliba helo mitir laba jibaaran (Tusaale ahaan fasalka cabirkiisu 48 mitir oo laba jibaaran, waxaa markiiba wax ku fhigan kara 45 arday ugu badnaan). Sidaa awgeed, waxaa maamulka dugsiga Sare ee Nuuradiin (wiilasha) la farayaa inuu ardayda dugsigaa dhigata ku jaangooyo sharciga. Halkaasoo ardayda dugsiga Wiilsha ee Nuuradiin loo kala qaybin karo labada gelin ama in dugsigu kiraysto dhisme kale.